ကျောင်းသားဗီဇာမှ အလုပ်ဗီဇာပြောင်းတဲ့အခါ | Working Friends
2018年2月12日 2018年3月2日 Ever Smile
ဂပြနျမှာ ကြောငျးသားဗီဇာကနေ အလုပျဗီဇာပွောငျးတဲ့အခါ
အလုပျဗီဇာထဲမှာမှ အလုပျအမြိုးအစားအလိုကျ စညျးမဉျြးကနျ့သတျခကျြတှေ၊နထေိုငျခှငျ့တှေ မတူညီပါဘူး။ ရာထူးအမြိုးအစားအလိုကျ၊ ကုမ်ပဏီအလိုကျ၊မိမိရဲ့ တက်ကသိုလျကြောငျးမဂြောအလိုကျ ဗီဇာလညျး ကှာခွားသှားပါမယျ။
ဂပြနျမှာ တက်ကသိုလျ(သို့) ဆနျးမှနျး ဘှဲ့ရပညာသငျ နိုငျငံခွားသားကြောငျးသားမြားပွောငျးလဲနိုငျတဲ့ အလုပျဗီဇာနထေိုငျခှငျ့在留資格（ざいりゅうしかく）တဈမြိုးကတော့
ကြောငျးတကျနသေူမှမဟုတျပါဘူး။ မွနျမာကနေ တိုကျရိုကျ အလုပျဗီဇာလြှောကျထားရာတှငျလညျး ဒီနထေိုငျခှငျ့ဖွငျ့ ဗီဇာ ရရှိတာ မြားပါတယျ။
ဒီအလုပျဗီဇာအမြိုးအစားက ဘာလဲ ကွညျ့ကွညျ့ရအောငျ။
技術(ぎじゅつ) နညျးပညာ 理系(りけい)နညျးပညာအတတျကိုလလေ့ာထားသူ သိပ်ပံနညျးပညာဆိုငျရာ
人文知識(အသိပညာ) B.A ဝိဇ်ဇာဘှဲ့ပိုငျးဆိုငျရာ အသိပညာရပျလလေ့ာထားသူ စီးပှားရေး၊စီမံခနျ့ခှဲရေး၊စာရငျးအငျး၊အထှထှေရေုံးလုပျငနျး၊မနျနဂြော
国際業務(နိုငျငံတကာစီးပှားရေးလုပျငနျး) ဝိဇ်ဇာဘှဲ့ပိုငျးဆိုငျရာ အသိပညာရပျလလေ့ာထားသူ Translator &　Interpreter
ကုနျပစ်စညျးထုတျလုပျမှု တိုးတကျရေး စသညျ
အရငျဆုံး ဂပြနျမှာ တက်ကသိုလျ(သို့) ဆနျးမှနျး ဘှဲ့ရပညာသငျကြောငျးသားမြား အလုပျဗီဇာ「技術、人文知識・国際業務」ကိုပွောငျးတဲ့အခါ လိုအပျတဲ့အခကျြအလကျတှကေ
1. မိမိအလုပျလြှောကျသောအလုပျက ဝနျထမျးအငျအားသငျ့တငျ့တဲ့ ကုမ်ပဏီ၊ အဖှဲ့အစညျးကွီးဖွဈရပါမညျ။
တဈဦးတဈယောကျပိုငျ လုပျငနျးတှငျ အလုပျရသဖွငျ့ ဗီဇာလြှောကျထားလြှငျ မရနိုငျပါ။ ကုမ်ပဏီဝနျထမျးအငျအား ၂ယောကျ၃ယောကျပဲရှိတဲ့ ကုမ်ပဏီဆိုရငျ မရပါဘူး။
2. အလှနျလှယျကူသောအလုပျ (ဥပမာ-အခြိနျပိုငျးအလုပျသမားမြားလုပျသော အလုပျ ကှနျဗီနီစတိုးဆိုငျမှာ အရောငျးစာရေးမအလုပျတဈမြိုးတညျး)နဲ့ဗီဇာလြှောကျလြှငျ မရနိုငျပါ။ အရောငျးတငျမက ကှနျဗီနီမှာ လုပျရမယျ့ပစ်စညျးမှာခွငျး၊ Management လုပျခွငျးမြား ကို ပါ လုပျဆောငျရမညျ့ စီမံရေး၊ကွီးကွပျရေးပိုငျးလို ဝနျထမျးအနဖွေငျ့ အလုပျလြှောကျမှသာ ဗီဇာရနိုငျပါမညျ။
3. အလုပျခြိနျက သတျမှတျနှုနျးထားကို ပွညျ့မီရပါမယျ။
မိမိသညျ စကားပွနျရာထူးဖွငျ့ အလုပျလြှောကျခဲ့သညျရှိသျော ထိုကုမ်ပဏီတှငျ စကားပွနျအလုပျမှာ တဈပတျတဈခါ လောကျသာရှိပါက သာမနျဝနျထမျးအလုပျလုပျခြိနျတဈပတျနာရီ၎ဝစာ အလုပျမရှိ၍ ဗီဇာမကနြိုငျပါ။ (အလုပျခြိနျတဈရကျ ၈နာရီဆိုရငျ တဈပတျကို နာရီ ၄၀ကြျောက ပုံမှနျအလုပျခြိနျဖွဈပါတယျ)
4. မိမိသငျယူထားသော ပညာရပျနှငျ့ မိမိလုပျကိုငျမညျ့အလုပျ ကိုကျညီမှုမရှိပါက လညျးဗီဇာမရနိုငျပါ။
ဥပမာ- IT နဲ့ကြောငျးပွီးထားသော သူသညျ Sale&Marketing ရာထူးဖွငျ့ဗီဇာလြှောကျထားပါက မရရှိနိုငျပါ။ သို့သျော ဂပြနျနိုငျငံ တက်ကသိုလျဘှဲ့ရ နှငျ့ မိမိနိုငျငံတှငျ ၄နှဈတက်ကသိုလျဘှဲ့ရ ဖွဈပါက
မိမိနိုငျငံမှ Business ဘှဲ့ရထားတယျဆိုရငျ နောကျဆုံးဂပြနျတှငျ ရထားသော ဘှဲ့ (သို့ ) မိမိနိုငျငံမှယူလာသော ဘှဲ့ နှဈမြိုးလုံးဖွငျ့ လြှော့ပေါ့စဉျးစားပေးပါသညျ။
ဥပမာ- အိုငျတီနညျးပညာနဲ့ဘှဲ့ရထားသောကြောငျးသားသညျ ကှနျပြူတာကုမ်ပဏီ တှငျ အရောငျးအဝယျဌာန(အရောငျးဝနျထမျး) တှငျအလုပျရရှိ၍ ဗီဇာလြှောကျထားပါက မရနိုငျပါ။ ကှနျပြူတာ ဆားဗဈဌာနအနဖွေငျ့အလုပျလြှောကျထားပါက ရရှိနိုငျပါတယျ။ ထို့အတူ စီးပှားရေးကြောငျးဆငျးက ကားပွငျ အလုပျဖွငျ့ ဗီဇာလြှောကျထားပါက မရနိုငျပါ။ Management & Accounting , Marketing ဖွငျ့ ဗီဇာလြှောကျထားပါက ရရှိနိုငျပါတယျ။
ဗီဇာပွောငျးလြှောကျထားရာတှငျ သတိထားရမညျ့ အခကျြမြား
🍀 မိမိလြှောကျထားသော ကုမ်ပဏီတှငျ မိမိအတှကျ အလုပျလုံလောကျသော ပမာဏရှိရပါမညျ။
🍀 ဂပြနျလူမြိုး ကိုယျနှငျ့ ပညာအရညျအခငျြးတူသောသူမြားနှငျ့ လစာတူရပါမညျ။ အကယျ၍ မိမိက လစာနညျးနပေါက ဗီဇာမကနြိုငျပါ။
🍀 လုံလောကျသောဝနျထမျးဦးရရှေိသော ကုမ်ပဏီ ဖွဈရပါမယျ။ ဝနျထမျးဦးရမြေားသော ကုမ်ပဏီ ကွီးဖွဈပါက ဗီဇာရရနျပိုသခြောပါတယျ။
🍀 မိမိနောကျဆုံးတကျခဲ့သော ကြောငျး၏ စာမေးပှဲရလဒျသညျလညျး ဗီဇာလြှောကျထားရာတှငျ အရေးပါပါတယျ။ နောကျတဈခုကတော့ ကြောငျးချေါခြိနျပါ။ (ဗီဇာလြှောကျထားတဲ့အခါ ကြောငျးအောငျလကျမှတျ၊အမှတျစာရငျးတှနှေငျ့တကှ တငျလြှောကျရတာပါ)
🍀 နောကျဆုံးတဈခု အရေးကွီးတာက လကျရှိ ဂပြနျတှငျနထေိုငျစဉျတဈလြှောကျလုံး ကနျြးမာရေးခှနျ၊ ဝငျငှခှေနျ အစရှိသညျတို့ကိုလညျး ပုံမှနျဆောငျထားသော ရိုးသားကွိုးစားသူမြား ဖွဈပါက စိတျအေးခမျြးသာစှာဖွငျ့ ဗီဇာ လြှောကျထားနိုငျပါတယျ။
ဂပြနျမှာ သကျမှေးဝမျးကြောငျးတတျပွီး အလုပျဝငျဖို့ စိတျကူးထားရငျ ဒါလေးတှေ ဂရုစိုကျကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
ဂျပန်မှာ ကျောင်းသားဗီဇာကနေ အလုပ်ဗီဇာပြောင်းတဲ့အခါ
အလုပ်ဗီဇာထဲမှာမှ အလုပ်အမျိုးအစားအလိုက် စည်းမျဉ်းကန့်သတ်ချက်တွေ၊နေထိုင်ခွင့်တွေ မတူညီပါဘူး။ ရာထူးအမျိုးအစားအလိုက်၊ ကုမ္ပဏီအလိုက်၊မိမိရဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းမေဂျာအလိုက် ဗီဇာလည်း ကွာခြားသွားပါမယ်။
ဂျပန်မှာ တက္ကသိုလ်(သို့) ဆန်းမွန်း ဘွဲ့ရပညာသင် နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားများပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အလုပ်ဗီဇာနေထိုင်ခွင့်在留資格（ざいりゅうしかく）တစ်မျိုးကတော့
ကျောင်းတက်နေသူမှမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာကနေ တိုက်ရိုက် အလုပ်ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင်လည်း ဒီနေထိုင်ခွင့်ဖြင့် ဗီဇာ ရရှိတာ များပါတယ်။
ဒီအလုပ်ဗီဇာအမျိုးအစားက ဘာလဲ ကြည့်ကြည့်ရအောင်။
Science 理系(りけい)နည်းပညာအတတ်ကိုလေ့လာထားသူ သိပ္ပံနည်းပညာဆိုင်ရာ
人文知識(အသိပညာ) B.A ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာရပ်လေ့လာထားသူ စီးပွားရေး၊စီမံခန့်ခွဲရေး၊စာရင်းအင်း၊အထွေထွေရုံးလုပ်ငန်း၊မန်နေဂျာ
国際業務(နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း) ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာရပ်လေ့လာထားသူ Translator &　Interpreter
ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ရေး စသည်
အရင်ဆုံး ဂျပန်မှာ တက္ကသိုလ်(သို့) ဆန်းမွန်း ဘွဲ့ရပညာသင်ကျောင်းသားများ အလုပ်ဗီဇာ「技術、人文知識・国際業務」ကိုပြောင်းတဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေက
1. မိမိအလုပ်လျှောက်သောအလုပ်က ဝန်ထမ်းအင်အားသင့်တင့်တဲ့ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်ရပါမည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ပိုင် လုပ်ငန်းတွင် အလုပ်ရသဖြင့် ဗီဇာလျှောက်ထားလျှင် မရနိုင်ပါ။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအင်အား ၂ယောက်၃ယောက်ပဲရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီဆိုရင် မရပါဘူး။
2. အလွန်လွယ်ကူသောအလုပ် (ဥပမာ-အချိန်ပိုင်းအလုပ်သမားများလုပ်သော အလုပ် ကွန်ဗီနီစတိုးဆိုင်မှာ အရောင်းစာရေးမအလုပ်တစ်မျိုးတည်း)နဲ့ဗီဇာလျှောက်လျှင် မရနိုင်ပါ။ အရောင်းတင်မက ကွန်ဗီနီမှာ လုပ်ရမယ့်ပစ္စည်းမှာခြင်း၊ Management လုပ်ခြင်းများ ကို ပါ လုပ်ဆောင်ရမည့် စီမံရေး၊ကြီးကြပ်ရေးပိုင်းလို ဝန်ထမ်းအနေဖြင့် အလုပ်လျှောက်မှသာ ဗီဇာရနိုင်ပါမည်။
3. အလုပ်ချိန်က သတ်မှတ်နှုန်းထားကို ပြည့်မီရပါမယ်။
မိမိသည် စကားပြန်ရာထူးဖြင့် အလုပ်လျှောက်ခဲ့သည်ရှိသော် ထိုကုမ္ပဏီတွင် စကားပြန်အလုပ်မှာ တစ်ပတ်တစ်ခါ လောက်သာရှိပါက သာမန်ဝန်ထမ်းအလုပ်လုပ်ချိန်တစ်ပတ်နာရီ၎ဝစာ အလုပ်မရှိ၍ ဗီဇာမကျနိုင်ပါ။ (အလုပ်ချိန်တစ်ရက် ၈နာရီဆိုရင် တစ်ပတ်ကို နာရီ ၄၀ကျော်က ပုံမှန်အလုပ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်)
4. မိမိသင်ယူထားသော ပညာရပ်နှင့် မိမိလုပ်ကိုင်မည့်အလုပ် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက လည်းဗီဇာမရနိုင်ပါ။
ဥပမာ- IT နဲ့ကျောင်းပြီးထားသော သူသည် Sale&Marketing ရာထူးဖြင့်ဗီဇာလျှောက်ထားပါက မရရှိနိုင်ပါ။ သို့သော် ဂျပန်နိုင်ငံ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ နှင့် မိမိနိုင်ငံတွင် ၄နှစ်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ ဖြစ်ပါက
မိမိနိုင်ငံမှ Business ဘွဲ့ရထားတယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးဂျပန်တွင် ရထားသော ဘွဲ့ (သို့ ) မိမိနိုင်ငံမှယူလာသော ဘွဲ့ နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် လျှော့ပေါ့စဉ်းစားပေးပါသည်။
ဥပမာ- အိုင်တီနည်းပညာနဲ့ဘွဲ့ရထားသောကျောင်းသားသည် ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီ တွင် အရောင်းအဝယ်ဌာန(အရောင်းဝန်ထမ်း) တွင်အလုပ်ရရှိ၍ ဗီဇာလျှောက်ထားပါက မရနိုင်ပါ။ ကွန်ပျူတာ ဆားဗစ်ဌာနအနေဖြင့်အလုပ်လျှောက်ထားပါက ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ထို့အတူ စီးပွားရေးကျောင်းဆင်းက ကားပြင် အလုပ်ဖြင့် ဗီဇာလျှောက်ထားပါက မရနိုင်ပါ။ Management & Accounting , Marketing ဖြင့် ဗီဇာလျှောက်ထားပါက ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဗီဇာပြောင်းလျှောက်ထားရာတွင် သတိထားရမည့် အချက်များ
🍀 မိမိလျှောက်ထားသော ကုမ္ပဏီတွင် မိမိအတွက် အလုပ်လုံလောက်သော ပမာဏရှိရပါမည်။
🍀 ဂျပန်လူမျိုး ကိုယ်နှင့် ပညာအရည်အချင်းတူသောသူများနှင့် လစာတူရပါမည်။ အကယ်၍ မိမိက လစာနည်းနေပါက ဗီဇာမကျနိုင်ပါ။
🍀 လုံလောက်သောဝန်ထမ်းဦးရေရှိသော ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ရပါမယ်။ ဝန်ထမ်းဦးရေများသော ကုမ္ပဏီ ကြီးဖြစ်ပါက ဗီဇာရရန်ပိုသေချာပါတယ်။
🍀 မိမိနောက်ဆုံးတက်ခဲ့သော ကျောင်း၏ စာမေးပွဲရလဒ်သည်လည်း ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင် အရေးပါပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျောင်းခေါ်ချိန်ပါ။ (ဗီဇာလျှောက်ထားတဲ့အခါ ကျောင်းအောင်လက်မှတ်၊အမှတ်စာရင်းတွေနှင့်တကွ တင်လျှောက်ရတာပါ)
🍀 နောက်ဆုံးတစ်ခု အရေးကြီးတာက လက်ရှိ ဂျပန်တွင်နေထိုင်စဉ်တစ်လျှောက်လုံး ကျန်းမာရေးခွန်၊ ဝင်ငွေခွန် အစရှိသည်တို့ကိုလည်း ပုံမှန်ဆောင်ထားသော ရိုးသားကြိုးစားသူများ ဖြစ်ပါက စိတ်အေးချမ်းသာစွာဖြင့် ဗီဇာ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းတတ်ပြီး အလုပ်ဝင်ဖို့ စိတ်ကူးထားရင် ဒါလေးတွေ ဂရုစိုက်ကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
Previous Previous post: ရုံးသုံးပစ္စည်းလေးတွေကို ဂျပန်လိုပြောရအောင်
Next Next post: အလုပ်ရောက်လို့ဖုန်းကိုင်ရမှာကြောက်နေသလား။